Nezvedu - Jiangsu Runau Electronics Kugadzira Co, Ltd.
Chinja kuita kukwana, Zadzisa kune zvakanaka
Runau Electronics Kugadzira Co, Ltd inotungamira inogadzira emagetsi semiconductor michina muChina. Iine tekinoroji inozivikanwa pasi rese uye hunyanzvi hwekugadzira hwakatangwa uye hwakagamuchirwa, ivo vavambi veRunau Electronics vakapinda mune yakakwira simba semiconductor indasitiri muChina kweanopfuura makore makumi matatu. Runau akawana hunyanzvi hwekupa mhinduro dzakapusa mukutsvagisa, dhizaini, kusimudzira, kuyera, uye kugadzira iwo emagetsi emagetsi emagetsi, ma module emagetsi, uye zvikamu zveungano zvemagetsi anoshanda masisitimu. Runau iri mukwanisi izere yekuona kupa hunyanzvi hwehurumende uye hwakavimbika mashandiro emagetsi emagetsi zvigadzirwa. Pese pazvinenge zvichidikanwa, matekinoroji edu, mainjiniya, timu yekugadzira uye vanoita zvekutengesa vanoshanda pamwe nevatengi vedu kuona mhando yepamusoro, kuwanikwa kwepanguva, uye kushanda nesimba kwenzvimbo dzemagetsi.
Iyo kambani yakavakwa ne1000m2 yekuchenesa-yakachena semusangano, ma100s anoisa zvivakwa zvemberi zvekugadzira uye zviyero zvekuyera, nhengo dzine tarenda kwazvo dzevane makumi manomwe vane ruzivo vashandi mumutsara wekugadzira, mainjiniya vane gumi nevaviri uye mahunyanzvi (vana mainjiniya) muR & D uye mauniti ekugadzira. . Dr. Henri Assalit, ane mukurumbira muAmerican simba semiconductor indasitiri, akakokwa seye technical technical consultant. Iyo yekucheka kumucheto maitiro hunyanzvi uye chiyero chechigadzirwa chakashandiswa muRunau kumisikidza makwikwi ezvakanakira muhunyanzvi uye kugadzira.
Nekuenderera mberi kwekushanduka-shanduka uye hwekucheka-kumucheto tekinoroji yakashandiswa, Runau inyanzvi inozivikanwa muhunhu hwepamusoro uye mashandiro emagetsi semiconductor michina inogadzira muChina, kadhi rekumutsara rinosanganisira:
● Thyristor & rectifier diode chip, mativi thyristor chip
● Thyristor & rectifier diode, welder diode, GTO, yekudhinda-kurongedza IGBT, magetsi module, uye magungano.
● 6”Thyristor & rectifier uye 8500V yakakwira voltage mudziyo inowanikwa mune yekugadzira mutsara.
Unyanzvi hwezvigadzirwa hunoshandiswa zvakanyanya mukutenderera kwemagetsi, kutenderera, kupisa induction, magetsi emagetsi, electrolysis, frequency converter, nyoro yekutanga, mota yekumhanyisa controller, UPS, SVC & SVG nemidziyo yemumba, nezvimwe.
Runau inogara nhaka nekukasira kuita, kuvandudza kunopfuurira, uye zano repasirese rebasa. Runau anoenderera mberi nekupa mhinduro dzekuvandudza uye dzevatengi mumunda weakakwira voltage & yakakwira yazvino kifaa uye sisitimu yekubatanidza musimba semiconductor kunyorera kune vese wepasirese.